ड्रोन विमानले यसरि खिच्यो सगरमाथासहित हिमालहरुको भिडियो
मे १८, २०१७
एक जना पश्चिमी मुलुककका नागरिक नेपाल गए । गत फर्वरी महिनामा । उनले एक विमान साथमा लिएर गए । अर्थात पाईलट बस्नु नपर्ने, रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने सानो आकारको ड्रोन भनिने विमान । उनले १६ दिन खुम्बु क्षेत्रमा...
पत्रकारको आचारसंहिता कस्तो हुनुपर्छ त ? (विशेषज्ञको अन्तर्वार्ता)
सेप्टेम्बर २२, २०१६
पत्रकारले लेख्ने, बोल्ने र रिपोर्ट गर्ने विषयका बारेमा धेरै गुनासा, बिरोध र चर्चा हुने गर्छ । पत्रकारले लेखेका विषय, समाचार, गरिएका रेडियो र भिडियो रिपोर्टका बारेमा आचार संहित्ता नाघेको भन्ने आरोपपनि निकै सुनिन्छ । त्यसो त नेपाल...
सरकारी मेडियाले बन्देज गरेको एउटा राष्ट्रवादी गित
नेपाल के स्वतन्त्र, सार्वभौम छ भन्नु ? जाबो एउटा गीत त हाम्रो सरकारी मेडियाले बजाउन सक्दैन । हामी, हाम्रो सरकार के राष्ट्रवादी भन्नु ? हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा गाएको गितपनि बजाउन बन्देज गर्छ । निजि केहि मेडियाले फाट्टफुट्ट...
फ्रान्सेलीहरु माझ नेपाली कार्यक्रमको भिडियो रिपोर्ट
मे ४, २०१६
गत शनीबार लियोंमा नेपाली कार्यक्रम थियो । नेपाली कार्यक्रममा धेरै गतिबिधी भए, छोटो समयमै । फ्रान्स, स्विजरल्याण्ड र बेल्जियमबाट यो कार्यक्रम सफल बनाउन आएका नेपाली कलाकारहरुले कार्यक्रममा आएका फ्रान्सेलीलाई लोभ्याए । कार्यक्रम कस्तो भएको थियो त ?...
चर्चित फोटोग्राफरलाइ ठग्नेले पटक पटक अर्थमन्त्री हुँदा के सम्म ठगेन होला ?
अप्रिल २७, २०१६
पूर्व ग्रिहमन्त्री डा रामशरण महतले वरिष्ठ फोटोपत्रकार मिन बज्राचार्यलाई ठगेछन् । जन आन्दोलनका बेला ज्यान बाजी राखेर, जोखिम लिएर उनले खिचेका तस्विर लिए । इन् डिफेन्स अफ डेमोक्रेसी भन्ने किताब लेखे । त्यो पुस्तकको मुखप्रिष्ठ (कभर) मा...